ZEC inonzi yakapinza vechidiki veZanu-PF mabasa
Vamwe vagari vemuChinhoyi pamwe nevezvematongerwo enyika vari kushoropodza Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, nekupinza basa vechidiki veZanu PF kuti vashambadzire kunyoresa kuvhota pasi pekomisheni iyi.
ZEC, iyo iri pakati pekushambadzira nezvehurongwa hwekunyoresa kuvhota huri kupinda muchikamu chechipiri neSvondo, iri kupomerwa mhosva yekupinza vechidiki veZanu PF basa rekushambadzira chirongwa ichi veruzhinji vachiti havaite basa nemazvo sezvo vaine kwavakarerekera.
Vazhinji vataura neStudio7 vanoti havasi kufara nekuona nhengo dzebato reZanu PF dzakapfeka nhumbi dzebasa dzeZEC vachifamba mudzimba vachidzidzisa vagari nezvehurongwa hwekunyoresa kuvhota.
VaDanson Mapfumo vanoti vari kushushikana zvikuru nekuona vechidiki veZanu PF vachidzidzisa vagari nezvenyaya yekunyoresa kuvhota vari pasi pebazi reZEC.
VaMapfumo vanoti izvi zvinokonzera kuti vasagamuchire dzidziso yavanenge vachipa.
Mumwe mugari wemuChinhoyi aramba kudomwa nezita sezvo achityira hupenyu hwake anoti ZEC yakanganisa kutora nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika.
Mugari uyu anoti ZEC ingadai yakapinza vanhu mabasa nekuda kwemapepa efundo kwete kuti anotsigira bato ripi.
Munyori mukuru webato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai mudunhu reMashonaland West, VaKadewere, vanoti zviri kuitwa neZEC mucherechedzo wekuti ZEC iri kuramba kurumurwa kubva kuZanu PF.
VaKadewere vanoti zviri kuita ZEC kukanganisira vanhu vanenge vachida dzidziso yakakwana yavanopakurirwa nevanhu vakadzidzira basa ravo.
Asi nhengo yeZanu PF yechidiki, VaBrian Nhokwara, vanoti havashamisike nemashoko ekuda kusvimbisa zita reZEC nemapato anogara achikundwa musarudzo akafanana neMDC.
VaNhokwara vanoti munhu wese ane kodzero yekutsigira bato raanoda nekudaro hazvishamise kuti pangaite vanhu vanoshanda kuZEC vanotsigira mapato ose kusanganisira bato reZanu PF.
VaNdlovu vanoti ZEC haipinze basa nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika dzine zvinzvimbo mumapato avo.
Vashandi veZEC vari kufamba mudzimba mumatunhu madiki eMakonde neZvimba vachiudza vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota muchikamu chechipiri chekunyoresa icho chiri kutanga neSvondo kusvikira musi wa13 Mbudzi.
Mune imwewo nyaya, ZEC yambomisa kuita musangano wayanga yakaronga nemapato wekuzeya matambudziko avakasanga nawo muchikamu chekutanga vachiti wave kuitwa neMuvhuro.
Asi VaKadewere vanoti musangano uyu wanga wakanaka zvikuru kuti vagadzirise zvakakanganisika muchikamu chekutanga.
VaKadewere vanoti imwe nyaya yavanga vachida kuturira ZEC ndeyekuti ZEC ikwanise kudzokorora kunyoresa munzvimbo dzakarasikirwa nenguva nekuda kwekuti ZEC yakanonoka kutanga chikamu chekutanga mune dzimwe nzvimbo uye dzimwe nzvimbo dzakambogara mazuva dzisinga nyorese kuvhota nekuda kwezvekushandisa zvakanga zvisipo.